Dhageyso:-Aqalka Sare oo Xukuumadda u gudbinaya cabasho ka timid Hir-Shabeelle
Monday February 11, 2019 - 00:01:26 in Wararka by Mogadishu Times
Sanoter Cusmaan Axmed Macow oo ka mid ah Xildhibaannada Aqalka Sare oo Maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho ah in amaanka deegaanada Hir-Shabeelle ay AMISOM kala wareegeyso dowladda Federaalka,hayeeshee M
Sanoter Cusmaan Axmed Macow oo ka mid ah Xildhibaannada Aqalka Sare oo Maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho ah in amaanka deegaanada Hir-Shabeelle ay AMISOM kala wareegeyso dowladda Federaalka,hayeeshee Madaxda Hir-Shabeelle ay qabaan inaysan dowladda ku filneyn. Waxa uu sheegay in Wasiirka Amniga Hir-Shabelle uu cabashadaas uu soo gaarsiiyay kana aqbaleen,isla markaana ay u gudbin doonaan Madaxda Dowladda Federalka Soomaaliya si wax badan looga bedelo. Weli ayuu sheegay in aan la gaarin xilligii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u diyaar garoowi lahaayeen inay amaanka dalka kala wareegaan Ciidamada AMISOM oo dowladda ka caawiya dhinaca amniga,balse Aqalka Sare uu Go'aan ka qaadan doono.
Dhawaan ayaa soo baxday in 1,000 ka mid ah Ciidamada Burundi eek u sugan deegaanada Hir-Shabeelle dalkooda dib loogu celin doono,hayeeshee taasi waxaa walaac ka muujiyey Madaxweynaha Maamulkaas Maxamed Cabdi Waare,waxaana uu sheegay inay dadaal ku bixin doonaan sidii go’aankaas looga laaban lahaa.
Sanoter Cusmaan Axmed Macow waxa uu sheegay in Hir-Shabeelle uu yahay halbowlaha Soomaaliya,sidoo kalena isku xiraayey Koofurta iyo Waqooyiga dalka Soomaaliya,siweyna looga taxadiri doono amniga.
Hoos Ka Dhageyso Codka Sanoter Cusmaan Axmed Macow.